1 qof ayaa dhintay, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax lala eegtay ciidanka Kenya ee Maandheera. – Radio Daljir
1 qof ayaa dhintay, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax lala eegtay ciidanka Kenya ee Maandheera.
Mandheera Nov, 24 ? Ugu yaraan 1 qof ayaa dhintay 5 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kaddib markii qarax nooca dhulka lagu aaso ah saakay aroor-nimadii lala eegtay ciidanka milatariga xukuumadda Kenya ee ku sugan degmada Mandheera ee gobolka waqooyi bari Kenya.
Wal-wel iyo cabsi xooggan ayaa laga dareemayaa dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Mandheera, waxayna ka cabsi qabaan in loo xirxiro dadkii rayidka ahaa eek ag-dhawaa halka uu qaraxu ka dhacay, waxaana ciidanka milatariga Kenya ay had iyo goor caado ka dhigteen markii qarax noocaas oo kale uu dhaco, inay xirxiraan dad rayid ah oo aan waxba galabsan.
Warar madax-banaan oo laga helayo magaalada Mandheer ayaa ku waramaya inay halis yihiin qaar kamida 5 qof ee ku dhaawac-may qaraxaasi, mana ahan qaraxii ugu horeeyay ee lala eegyo ciidamo ka tirsan milatariga Kenya, tan iyo markii ay ciidanka Kenaya faragalinta milatari ku sameeyeen dalka Soomaaliya.